please , I want to know about IP address. Added by min han (N.E student) on July 29, 2014 at 3:32pm —
အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ PDF Search V1.0 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က android app တွေပဲ တင်နေတာဆိုတော့ ဒီကောင်ဘာလဲ android သမားကြီးလား ထင်နေမှာဆိုးလို့ window application တစ်ခုတင်ပေးလိုက်တာပါတကယ်တော့ programming ဆို အကုန်စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတော့ရာ Adobe Reader မှာ Advance Search function ရှိသားပဲ ဘာလို့ ဒီဟာလိုလည်းဆို ဒီဟာကတော့ဖြင့် keywords suggestion လေးထည့်ပေးထားတာပေါ့ဗျာ aလို့စရိုက်လိုက်တာနဲ့ google မှာလိုaနဲ့စတဲ့စာလုံးလေးတွပြပေးတာပေါ့ဗျာ… Continue
Added by kglay@it on July 12, 2014 at 11:46am —
No Comments Android L သို့ ( စတင်ခြင်း)
ဒါကတော့ Android L မှာရှိတဲ့ Component လေးတွေကို စမ်းသပ်တော့မယ်ဆိုရင် Setup လုပ်ရတဲ့ အဆင့်လေးတွေနဲ့ ကြုံခဲ့တဲ့ ပြသနာလေးတွေကို ဖြေရှင်းခဲ့ ပုံလေးတွေပါ ။ ကိုယ်တိုင်က Android Development ကို လုပ်ကိုင်နေပြီး L Preview ထဲက Components တွေ L Support Library ထဲက Component တွေကုို စသုံးတော့မယ် ဆိုရင် သိသင့်တာလေးတွေပါပဲ ..
https://medium.com/@aungpyaephyo/android-l-96712454e625 Added by Aung Pyae Phyo on July 5, 2014 at 3:24pm —
No Comments Android L သို့ အမြည်းနည်းနည်း
ဒါက Android L နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖတ်မိထားတာလေးတွေကို ရေးထားတဲ့ Notes လေးပါ ။ L Preview ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ စ လေ့လာနေတဲ့ Android Developer တစ်ယောက်အတွက် Heads Up လေးတွေဆိုပါတော့ .. https://medium.com/@aungpyaephyo/anroid-l-f7f0e7554eec Added by Aung Pyae Phyo on July 5, 2014 at 3:19pm —
No Comments Executive Project Secretary (1) Post
- Daily cash flow handling in… Continue
Added by manawphyulay on June 27, 2014 at 9:31am —
No Comments Project Manager (1) Post
- Managing staff members in CVT-CI… Continue
Added by manawphyulay on June 27, 2014 at 9:27am —
No Comments Myanmar Digital Clock Widget
မြန်မာဒီဂျစ်တယ်နာရီလေးပါ မြန်မာစာလုံးသုံးပြီး နာရီနဲ့နေ့ရက်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။ သင့်ဖုန်းရဲ့ ဟုမ်းစကရင်မှာ widget အနေနဲ့ တင်ထားလို့ရပါပြီ ။ ဒီနာရီလေးမှာ မြန်မာစာမြင်ရဖို့ Root လုပ်ထားစရာ မလိုသလို ဇော်ဂျီဖောင့်သွင်းထားစရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ စမ်းကြည့်ချင်ရင် Install လိုက်နော် ။
မြန်မာဒီဂျစ်တယ်နာရီလေးပါ အချိန်ထက်အရေးကြီးတာမရှိ မြန်မာလိုမြင်ရတော့ပိုကောင်းပေါ့…
Added by kglay@it on June 23, 2014 at 2:16pm —
No Comments How to defend from half-scan attack from ip address
Half Scan Attack နေ့တိုင်းအလုပ်ခံနေရလို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ကူညီကြပါဦး..
half scan attack အလုပ်ခံရရင် connection ပြတ်ပြတ်သွားလို့ ... Dota2ကျကျသွားတယ် Added by achitlumite on June 22, 2014 at 5:26pm —
No Comments အင်တာနက်သုံးရင်း ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရှာမလဲ?
ကမ္ဘာကျော် Internet Muti -Level Marketing Advertising နည်းလေးတွေပါ... အခုနာမည်ကျော် facebook နှင့် Google တွေမှာလဲ သုံးနေတဲ့ နည်းတွေပါ...အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင် ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်...ကျွှန်တော်ဆို amazon က affiliate ကိုတောင်ယူရောင်းတာဗျ...ဒါပေမဲ့ အသိတွေထဲက internet ကနေ ပစ္စည်းဝယ်လို့ရမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေ ပိုများနေလို့နှင့် Credit Card , Debit Card လေးတွေ တောင်မရသိကျမရှိကျသေးတာကိုတွေ့နေရသေးတယ်.... တချို့ဆိုရင် internet… Continue
Added by Ko Nge on June 1, 2014 at 3:13pm —
No Comments စင်ကာင်္ပူပိုးထနေတဲ့ ရွှေမြန်မာအုပ်စုလေးတွေ အခန်းတွေစုဌားပြီး အလုပ်လာရှာနေကျတယ်!
စင်ကာင်္ပူပိုးထနေတဲ့လောလောဆယ်ဘွဲ့ရရွှေ့လေးတွေ ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ စင်ကာပူကိုလာစေချင်ပါတယ်...… Continue
Added by Ko Nge on May 21, 2014 at 6:29pm —
No Comments Firefox browser is unusually
My use latest Firefox browser. But my old days used it very we'll. But just now it advertisements are many many open when I download something books,video etc. How I can use have not advertisements. Added by Khin Maung Kyaw on May 2, 2014 at 2:38pm —
No Comments Myanmar font for iOS 7.1.1
Please help me because my iPad is ios7.1.1 ,
But does not has myanmar font. How I do it.
Please help me? Added by Khin Maung Kyaw on May 2, 2014 at 2:32pm —
Please help me? Added by Khin Maung Kyaw on May 2, 2014 at 2:31pm —
No Comments မြန်မာ အွန်လိုင်း 3D ပန်းပုဆော့ဝဲလ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး 3D ပန်းပု ဆော့ဝဲလ် Myansculpt သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် 3D ပန်းပုရုပ်များ၊ 3D model များကို ပန်းပုထုသကဲသို့ လွယ်ကူစွာ ဖန်တီးနိုင်သည့် မြန်မာ web application… Continue
Added by Yan Naing SOe on March 25, 2014 at 4:55pm —
No Comments About Dongle
usb secure dongle အသုံးပြုနည်း လေးသိချင်ပါတယ် သိရင်ပြောပေးကြပါအုန်းနော်........................ Added by Zon on January 30, 2014 at 10:48am —
No Comments Tuts+ Premium Membership 180$ (1 year free)
Tuts+ Premium membership 180$ တန် တစ်နှစ်စာ ကို New Relic မှာ deploy လုပ်ရုံနဲ့ ရမှာ။ Promotion တွေ့တာက Nov ထဲကပေမယ့် ခုထိ လုပ်လို့ရသေးတယ်။ မနေ့ကပဲ လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပြီ။ T-Shirt လည်းရမှာ။ T-Shirt ပို့ပေးမယ့် နိုင်ငံထဲတော့ မြန်မာမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ လိုချင်ပြီး plug in & deploy လုပ်ရအဆင်မပြေရင် လှမ်းပြောလိုက်နော်။ Promotion Link: … Continue
Added by khinelay on January 11, 2014 at 11:15am —
No Comments လုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လူငယ်များ အရည်အသွေး တိုးတက်လာစေဖို့ အလွန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ စာတွေ့လက်တွေ့ နှစ်ရပ်လုံး ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူ လူငယ်များ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CVT Myanmar… Continue
Added by manawphyulay on December 7, 2013 at 11:55am —
No Comments သီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးများနှင့် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ဘဝ
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ခက်ခဲလှပြီး အဆမတန် ပင်ပန်းလှပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေဆိုရင် နေပူ၊လေပူဒဏ်တွေ ခံနေကြရပြီး ချွေးတွေက ကိုယ်ပေါ်မှာ… Continue
Added by manawphyulay on December 7, 2013 at 11:30am —
No Comments New Li-Fi technology to connect computers with the help of light bulbs
Four computers can be connected to internet through one- watt LED bulb using light asacarrier instead of traditional… Continue
Added by Ko-AKM on October 18, 2013 at 10:12am —